नेपालमा भ्रष्टाचार ः उन्मुक्तिका उपायहरु – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नेपालमा भ्रष्टाचार ः उन्मुक्तिका उपायहरु
२०७१ मंसिर २४, बुधबार ०३:०६ गते
समाजमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अपेक्षा राख्ने हो भने हरेक नागरिकले सबैभन्दा पहिले आफूले भ्रष्टाचार गर्न भएन र भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको विकास हुनुप¥यो । भ्रष्टाचारीलाई घरघरबाटै बहिष्कार गर्न आवश्यक छ, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने संस्कार आवश्यक छ । हरेक व्यक्तिको सम्पतिको स्रोत खोजी गर्न आवश्यक छ, भ्रष्टाचारीको मलामी नजाने संस्कारको थालनी गर्न आवश्यक छ र भ्रष्टाचारविरूद्धको संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । हरेक नागरिकले यस्ता कुरामा ख्याल नराखिदिने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन ।
अहिले भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ छ । भ्रष्टाचार नगर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु हुन्छन्– कतै ¥याली, कतै गोष्ठी, कतै अन्तरक्रिया त कतै छलफल । वर्षमा एक दिन विश्वभर यस दिवसलाई मनाइन्छ, बाँकी दिन कमै चासोको विषय बन्छ । समाजमा सबैभन्दा खतराको अवस्थामा रहेको यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनेको जमात कम देखिन्छ । यसको कारण हो, जोकोही व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचारको नजिक पुगेको हुन्छ । कतिपयका लागि भ्रष्टाचार रहर होइन, बाध्यता बनेको छ ।
अहिले नेपालमा सरोकार राख्ने निकायहरु जिम्मेवार बन्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन् । नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अंगहरु नै जिम्मेवार बन्न नसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको नेपाल राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीको प्रतिवेदनमा सन् २०१४ मा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कमजोर भएको उल्लेख छ । देशभित्र रहेका हरेक सार्वजनिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायम राख्न राजनीतिक दलले खराब भूमिका निर्वाह गरेका कारण समस्या बढ्दै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको निजामती सेवालाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने प्रमुख चुनौती रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालका ६९ प्रतिशत नागरिकले सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारलाई गम्भीर समस्याका रुपमा हेरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार झन्डै एक चौँथाइ नेपाली प्रतिदिन १ दसमलव २५ अमेरिकी डलर वा त्यसभन्दा पनि कममा निर्वाह गर्छन् । उनीहरु सार्वजनिक सेवामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहे पनि क्षमता, सुशासन र आफूले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका आधारमा सबैभन्दा तल रहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशत नेपाली राजनीतिक पार्र्टी भ्रष्टाचारी छन् भन्ने विश्वास गर्छन् । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी छन् भन्ने विश्वास ८५ प्रतिशत नेपालीको छ । ७२ प्रतिशत नेपाली पछिल्लो दुई वर्षमा भ्रष्टाचार बढ्दै गरेको विश्वास गर्छन् ।
प्रतिवेदनले केही सुझावहरु प्नि दिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने तथा कानुन र व्यवहारमा रहेका खाडल पुरिनु पर्ने विषय उल्लेख छन्, प्रतिवेदनमा । प्रतिवेदनले कानुन र व्यवहारमा देखिएको फराकिलो अन्तरले सरकारी अधिकारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । यसका लागि गरिबी निवारण तथा विकासका सम्भावना बढाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको तुलनामा नेपाल दुई अंक तल झरेको छ । नेपाल कुल १०० अंकमा २९ का साथ १२६औँ स्थानमा पुगेको छ । गत वर्ष ३१ अंकका साथ ११६ स्थानमा थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा भुटान छ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा अफगानिस्तान छ । विश्वभर हेर्दा भ्रष्टाचार कम हुने देशको सूचीमा ९२ अंकका साथ डेनमार्क पहिलो स्थानमा छ भने सबैभन्दा बढी हुनेमा ८ अंकका साथ सबैभन्दा तल सोमालिया र उत्तर कोरिया छन् ।
मात्राको फरक हो, विषय र प्रकृतिअनुसार धेरै या थोरै भ्रष्टाचार सबैले गर्छन् । भ्रष्टाचार रहरमा होइन, बाध्यतामा धेरै भएको देखिन्छ । इमानमा बाँच्ने रहर हुँदाहुँदै बाध्यतामा परेर प्रतिस्पर्धाका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्था देखिन्छ । समाजमा इमानदारिताको सम्मान कम देखिँदै गएका कारण अहिले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै आममानिसले आर्थिक विषयलाई मात्र लिएको पाइन्छ तर नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत विविध विषयमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यहाँ आर्थिकभन्दा पनि सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार त नीतिगत भ्रष्टाचार छ । तर, सत्य कुरा के हो भने जुनसुकै विषयमा अनियमितता गरे पनि त्यो आखिर आर्थिक मुद्दासँग त जोडिएको हुन्छ नै ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि माथिबाटै सुधार हुनुपर्छ, तलबाट सुधार सम्भव छैन– अधिकांशको विचार यही छ । तलका मानिसले रूपैयाँ सय–पचास खाएको मात्रै देखेर र लेखेर भएन, माथिबाट लाख–करोड खानेहरुको देख्नु र लेख्नुप¥यो । यी र यस्तै गुनासाहरु बढी आउने गरेका छन् । तर, मेरो विचार फरक छ । माथि पनि तलसँग जोडिएको हुन्छ । हरेक मानिस माथि पुग्ने भनेको तलैबाट हो । अब तलका मानिस सचेत हुनुपर्छ । जो मानिस माथि पुगेर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, उसको उद्गमस्थल तलै हो भन्ने कुरा बिर्सन भएन । ऊसँग जोडिएका हरेक विषय तल नै रहेका हुन्छन् ।
त्यसैले, हामी सबैले सामाजिक रुपमा अभियान चलाउन आवश्यक छ । आफ्नो पहिचानमा रहेका मानिस हिजो कुन अवस्थामा थिए र आज कहाँ पुगेका छन् । हिजोको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो र आज कस्तो भएको छ । कमाइएका भनिएका सम्पत्तिको स्रोत खुलेका छन् कि छैनन् ? खोजी गर्न आवश्यक छ । अहिलेको समाजमा परिवारमै पनि भ्रष्टाचार गर्नमा प्रोत्साहन भइरहेको देखिन्छ । जसरी भए पनि परिवारले पैसा कमाउनैपर्छ भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ । परिवारबाटै नाजायज प्रेसर दिइने गरेको उदाहरण पनि भेटिएका छन् । सदाचारी र स्वाभिमानी हुन साँच्चीकै सिकाइदिने हो भने यो समाजमा धेरै भ्रष्टाचार कम हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गर्ने नै हो भने भ्रष्ट नबनाउन प्रेरित गर्न आवश्यक छ ।
समाज पैसाको पछि घुमिरहेको पाइन्छ । अपत्यारिलो तरिकाले धन आर्जन गर्नेहरुको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? कसैले खोजेको पाइन्न । लुटेर, चोरेर, थुतेर, धुतेर जसरी कमाए पनि यो समाजमा कमाउनेकै मात्र शानमान छ भने अनि साम, दाम, दण्ड, भेद जे प्रयोग गरेरै भए पनि कमाउन नै लाग्नु स्वाभाविक छ ।
समाजमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अनियमितता गर्नेहरुलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने नीति लिनेमात्र हो भने धेरै भ्रष्टाचार कम हुन्छ । त्यस्ता मनिससँगको संगत कम गर्ने गरौँ । त्यस्ता मानिसका परिवारसँग नाता जोड्दा हौसिने हामी नाता जोड्न होइन, तोड्नतिर लाग्न आवश्यक छ । सामाजिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्नेक्रममा असहयोग
गरौँ । उसका घरमा हुने हरेक सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी नभैदिऊँ । हरेक विषयमा असहयोग गरौँ । नैतिक रुपमा असहयोग गरौँ । सेवाका लागि कोहीसँग सहयोग लिँदै छौँ भने सोचौँ, कसले कस्तो र कुन स्रोतवाट आएको रकम दिँदै छ । भ्रष्ट रकम दिनेको जयजयकार लगाउन छाडौँ । भ्रष्ट, धनीमानीको मुख ताक्ने होइन, इमानका साथ अघि बढौँ ।
व्यक्तिगतस्तरबाट हुने प्रयास सबैले पालना गर्ने हो भने सरकारीस्तरबाट पनि मह¤वपूर्ण काम गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयअनुसार नेपाली सेना, न्यायाधीश कसैको पनि भ्रष्टाचारमा सरकारी संयन्त्रले अनुसन्धान गर्न पाउने अवस्था छैन । नेपालमा सुशासनको विकास गर्ने र बिग्रँदै गएको वातावरणलाई विकास गर्ने हो भने नेपालले तत्काल केही नयाँ कानुन निर्माण गरेर मात्र पुग्नेछैन, अहिलेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन परिवर्तनसमेत गर्न आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको कार्यविधिले भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजिलैसँग उन्मुक्ति दिने वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई लिन सकिन्छ । यस ऐनमा अनुसन्धानको परिधि र सीमाबारेका कुरा अपूरो र एकापसमा बाझिने खालका रहेका छन् । यो सच्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, यस विषयमा सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । यो विषयमा सरोकार राख्ने निकायले ध्यान नदिने र चासो नराख्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिएर अपूरा र अधुरा रहेका यस्ता कानुन र नीतिको पुनरावलोकन गरी समयको मागअनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिला आफूले भ्रष्टाचार नगरौँ र अरुलाई गर्न बाध्य नपारौँ । सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन दबाब दिँदै जाऔँ । हरेक मानिसको हिजोको अवस्था र आजको अवस्था गहिरोसँग मूल्यांकन गर्ने बानीको विकास गरौँ । स्रोत नै नखुल्ने गरी सम्पत्ति कमाएर बसेका छन् भने उनीहरुलाई बहिष्कार गर्ने गरौँ । यस अभियानलाई घरघरबाटै, भाइभाइबाटै, बाबुछोराबाटै, अनि श्रीमान्श्रीमतीबाटै सुरू गर्न
आवश्यक छ । नभए, भावीपुस्ताले एक दिन हामीलाई धिक्कार्ने छन् । अब ढिला भइसकेको छ, समयमै ध्यान दिऔँ ।